Ururka Nabadda Cagaaran oo Dhir beeris ka bilaabay goobaha muhiimka ah ee magaalada Muqdisho+Sawirro - Hargeele - Wararka Somali State
Muqdisho.(SONNA):- Ururka Dhalinyarada Nabadda Cagaaran ee Soomaaliyeed ayaa bilaabay geedo beeris ay ku sameynayaan goobaha muhiimka ah,iyagoo Dhir fara badan ku talaallay xarunta dhalinyarada gobolka Banaadir.
Dhalinyaradan ayaa waxa ay wacyi-gelin ku saabsan ka hor tagida jarista dhirta iyo horumarinta deegaanka ay ka wadaan magaalada Muqdisho waxeyna Dhir kala duwan ay ku tallaalayaan waddooyinka iyo goobaha taariikhiga ah.
Guddoomiyaha Ururka Nabadda Cagaaran ee Soomaaliyeed Maxamed C/llaahi Buulle ayaa ka warbixiyay muhiimada dhirta ay u leedahay Deegaanka iyo dhibaatooyinka ay leedahay xaalufinta dharta.
“Ururka Dhalinyarada Ujeedkiisu waxa waaye inuu ka hor tago xaalufinta dhirta,islamarkaana uu ku tallaalo geedo waxtar u leh deegaanka iyo Bulshada Soomaaliyeed, si dalkeenna uu u noqdo mid cagaaran, barwaaqo ah,marka waxaa la doonayaa in la dhowro Dhirta lagana shaqeeyo horumarinta deegaanka,” ayuu yiri guddoomiyaha Ururka Nabadda Cagaaran ee Soomaaliyeed.
Mudooyinkan ayaa waxaa soconayay dadaalo la doonayo in lagaga hortago xaalufinta Dhirta si loo Horumariyo Deegaanka.
Sawir qaade:- Muuse Cismaan Abtow
Wasiirka Dastuurka oo guddoomiyay shir u dhaxeeyay UN-ka iyo qaar ka mid ah Wasaaradaha Xukuumadda